5 eke ọgwụgwọ na-emeso agbatị akara | Bezzia
Nke Torres | 13/01/2022 20:00 | Mma aghụghọ
Akara mgbatị na-apụta na akpụkpọ ahụ mgbe ọ gbatịpụrụ nke ukwuu yana eriri ndị na-enye collagen na elastin site na nkwụsị nke dermis. N'oge mbụ, A na-egosi akara ndị a na ụda na-acha ọbara ọbara ma ọ bụ na-acha odo odon'ihi nkwụsị nke eriri. Mgbe nke ahụ gasịrị, ha na-atụgharị na-acha ọcha ma nọrọ na akpụkpọ ahụ ruo mgbe ebighị ebi.
Mgbe ihe gbatịa pụtara enwere ike ịgwọ ya, enwere ike imezi ọdịdị ahụ ka ọ ghara ime ka akara ahụ bụrụ ihe na-adịghị mma. Ma ozugbo ha kwadoro, mgbe ha na-acha ọcha, ọ na-esiri ha ike iwepụ ha. Ọbụghịdị ọgwụgwọ ụlọ ndị kachasị ọnụ na-enye nsonaazụ pụtara ìhè. Agbanyeghị, meziwanye ọdịdị akpụkpọ ahụ ga-ekwe omume, ma na ngwaahịa ndị a kapịrị ọnụ, yana ọgwụgwọ anụ ahụ dịka ndị anyị na-ahapụ gị n'okpuru.
1 Ngwọta kachasị mma, mgbochi
1.1 Ngwọta maka mgbatị ahụ
Ngwọta kachasị mma, mgbochi
A na-emepụta akara nrịba anya, dị ka anyị kwuru, site na mgbaji nke eriri akpụkpọ ahụ. Nke a na-eme mgbe akpụkpọ ahụ gbatịpụrụ n'ụzọ na-adịghị mma, na-emekarị n'oge mgbanwe ibu na mberede. Ha na-emekwa n'oge ime ime, ọ bụghị naanị n'ihi mgbanwe dị arọ, kamakwa n'ihi ihe kpatara hormonal. Ihe ndị ọzọ na-emekarị bụ ihe nketa mkpụrụ ndụ ihe nketa, ịṅụ ọgwụ ụfọdụ ma ọ bụ nri na-adịghị mma nke na-adịghị ekpuchi ihe ndị dị mkpa maka ahụ.
Iji gbochie ha ịpụta agbatị akara na akpụkpọ ahụ, ọ kacha mma ịme ihe mgbochi. Nke mbụ na nke kachasị mkpa bụ hydration, n'ihi na akpụkpọ ahụ akpọnwụwo nkụ nwere ike ghara ịdị ike na-agbaji. Nke abụọ bụ nri. Rie nri eke, soro usoro nri dị iche iche, kwụ ọtọ na nke na-adịghị mma iji chịkwaa ibu gị. N'ihi na nke a bụ mkpịsị ugodi nke atọ na nke dị mkpa iji gbochie akara mgbatị.
Mgbanwe ibu na mberede bụ isi ihe kpatara ya nke ọdịdị mgbatị na akpụkpọ ahụ na nke kachasị egbochi ọgwụgwọ ha. Gbalịa ịnọgide na-adị mma ma ọ bụrụ na ị ga-agbaso nri slimming, jide n'aka na ọ na-ekpuchi mkpa nri gị ka ọnwụ ahụ na-aga n'ihu ma ghara imebi akpụkpọ ahụ gị. Tinye onwe gị n'aka onye ọkachamara na ị ga-enweta ihe mgbaru ọsọ gị.
Ngwọta maka mgbatị ahụ
Mgbe ụfọdụ, mgbatị ahụ na-apụta ọbụna mgbe ị na-elekọta ibu gị na akpụkpọ gị, n'ihi ihe dị iche iche. N'otu aka ahụ, ịnwere ike iji usoro ọgwụgwọ ọ bụla na-esote maka akara mgbatị. Ngwọta eke na ụlọ nke ga-eju gị anya, Na-adịgide adịgide na n'oge na-adịghị anya ị ga-ahụ ihe dị iche.
Mmanụ almọnd na-atọ ụtọ. Ngwaahịa sitere n'okike nwere ihe na-eme ka ọ dịghachi ndụ na vitamin E nke na-eme ka akpụkpọ ahụ dị omimi.
Aloe vera. Zuru oke maka ịgwọ akara mgbatị na-acha uhie uhie na igbochi ha ịtụgharị ọcha. Tinye aloe vera pulp ozugbo na akara mgbatị ahụ, ugboro abụọ n'ụbọchị ruo mgbe ị ga-ahụ ọganihu.
Lemọn ihe ọ juiceụ juiceụ. Ọgaranya na vitamin C, antioxidant na whitening mmetụta. Fanye otu lemon, gbanye akwa akwa ma tinye n'ọgbatị. Hapụ maka nkeji iri na ise wee kpochaa ya na mmiri dị nro.
Horsetail. Na mgbakwunye na ịba uru dị ukwuu site n'ime, horsetail etinyere ya ozugbo na akpụkpọ ahụ na-eme ka ọdịdị nke mgbatị ahụ dịkwuo mma. Nke a bụ n'ihi na ọ na-eme ka mkpụrụ ndụ akpụkpọ ahụ dị ọhụrụ ma na-emegharị ya. Kwadebe infusion na akpa abụọ ma tinye mmiri mmiri na akpụkpọ ahụ, na-eme ka ịhịa aka n'ahụ na mmegharị okirikiri ruo mgbe etinye obi gị dum.
Nduku. Ihe ọṅụṅụ nduku raw na-aba uru nke ukwuu maka ọgwụgwọ mgbatị. Nke a bụ n'ihi na ọ bụ ihe na-enyere aka ịmaliteghachi mkpụrụ ndụ akpụkpọ ahụ. Naanị ị ga-egbutu iberi nduku raw wee tinye ihe ọṅụṅụ ya n'ebe ọ gbatịa. Hapụ ihe dị ka nkeji iri na ise na mgbe ihe ọṅụṅụ nduku kpọrọ nkụ, wepụ ya na mmiri ọkụ.
Ngwọta ndị a maka mgbatị aka na-adị irè nke ukwuu, mana iji hụ nsonaazụ ya, ọ dị ezigbo mkpa na ị na-adịgide adịgide. Ọ bụrụ na ị na-emega ahụ mgbe niile ma na-agbaso nri nke nwere mkpụrụ osisi, akwụkwọ nri na nri eke, akpụkpọ gị ga-akawanye mma site n'ime.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Bezzia » Mma » Mma aghụghọ » Ngwọta eke 5 iji gwọọ akara aka
Mee mmemme gị n'ụdị!